Sida Loo Helo Shaqada Dubai ee 2020 🥇 【# No.1Guide】 Kaalmooyinka Fikradaha!
Sida loo Shaqeeyo Dubai ee 2020?
Maxaad ganacsigaaga u dhisi doontaa Dubai?
Madaxa Shirkadda John Smith
Adiga xitaa bilaw raadinta ama waxaad heshay waxoogaa war ah oo ku saabsan shaqooyinka Dubai. Adiguna waxaad ku cusub tahay suuqa shaqada ee UAE. Waa inaad marka hore garaacdaa shirkadda ugu weyn. Iyo Shaqada ugu fiican ee Dubai wali waa Imaaraatka.
Shirkadda Dubai City waxay had iyo jeer bixisaa macluumaad wanaagsan. Markan waxaan bixinaa macluumaad ku saabsan sida looga gudbi karo Emirates Cabin Crew Open Day / Qiimaynta + Wareysiga (Tilmaamaha qoritaanka + su'aalaha)
Helitaanka shaqo gaar ahaan Imaaraadka Carabta waxay qaadan kartaa waqti. Waa inaad xasuusnaataa in dadka shaqaaleysiinaya ku dhawaad ​​boqollaal shaqo-joojin maalin kasta. Waana hubaal dadka sida dhabta ah uga shaqeeya shirkadda Emirates. Waxbadan kama ogi adiga. Marka waa inay eegaan CV-gaaga khibradaada iyo dabcan, waxbarashaddaada shaqsiyadeed taasna waxay u oggolaaneysaa iyaga inay wax badan ka ogaadaan naftaada iyo maxaad noloshaada ku qabataa.
Marka had iyo jeer iska hubi inaad raacaysid tilmaamaheena hoosta. Sababta oo ah waxa aan dhab ahaantii qabanno shaqo doonka ah waxaan isku dayeynaa inaan caawinno si aad u hesho inta ugu badan ee aad awoodid marka la eego xagga shaqo raadinta ee Dubai iyo Abu Dhabi. Waxaan bixinaa talooyin iyo macluumaad kusaabsan shaqooyinka iyo sida loo maareynayo dalabka loogu talagalay loo-shaqeeyeyaasha mustaqbalka ee Imaaraadka Carabta iyo xitaa mararka qaar gobolka khaliijka.
Kaliya si loo hubiyo inaad hayso macluumaad wanaagsan oo dhammaystiran. Waxaan bixinaynaa macluumaadkaaga sida loo sameeyo dalabkaaga Imaaraatka sida saxda ah.
Fiidiyowgaan, waxaad ka heli kartaa tusaale ah Sida loo buuxiyo Imaatinka Cabin Crew Online Job Application ee ku yaal barta ay ku shaqeeyaan (iskuxiranku waa - http://emiratesgroupcareers.com/engli…).
Nidaamka codsigu aad ayuu muhiim ugu yahay shaqo raadintaada. Had iyo jeer waxaad u baahan tahay inaad noqoto 100% hubinta in dalabkaagu uu ku dhow yahay madhan yahay marka loo eego baahiyaha shaqaaleynta. Hoos Ka daawo Filimka YouTube-ka. Ninkan waa la sameeyay loogu talagalay dadka shaqo doonka ah iyo dadka ka kala yimid daafaha dunida kuwaas oo aan aqoon sida loo buuxiyo dalabka shirkadda Emirates. Sababta oo ah waa wax aad u adag in la sameeyo sidaa darteed dadka qaarkii waxay caawiyaan dadka kale inay maareeyaan naftooda iyo bixinta idinka idinna ah macluumaad wanaagsan oo ku saabsan sida loo sameeyo taas hab sax ah. Taasna waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku hesho dalabkaaga hortiis wakiilada shaqaaleynta ee shirkadda ugu weyn dalka Imaaraadka Carabta.
Marka hore, Samee CV wanaagsan
CV kaamil ah, ama maxay tahay?
Miyaad dirtaa CV isku mid ah, xitaa haddii aad codsatid jagooyin kala duwan? Jawaabta “Bixinta” ee xayeysiiska yaraynta waxtarka raadintaada. Furaha guusha waa xulashada macluumaadka iyo soo bandhigida xaqiiqooyinka jira ugu muhiimsan yahay loo shaqeeyaha mustaqbalka.
Resumeygu waa mid ka mid dukumiintiyada ugu muhiimsan. Imaaraadyada, bilowga, tani waa dukumintiga kaliya oo noloshaada badbaadin kara. Hagaag, dhaqaatiirta guud ahaan kuhadlku kama fiirsadaan dib u bilaabida iyo xarafyada ku habboon. Tani waa sababta Shirkadda Dubai City gelinta hage ku saabsan sida loo helo Shaqo Dubai gudaha 2020 ?.
Jawaabtaadu waxay noqon kartaa caddeynta go'an iyo xirfad shaqo. Waa muhiim inaad cadeyso inaad la kulantid waxa laga filayo shaqo bixiye mustaqbalka ka jooga Dubai. Intii lagu guda jiray falanqaynta xayeysiinta, waxaad fursad u leedahay inaad go’aansato haddii aad haysid diyaarinta saxda ah iyo haddii aad ku qanacsan tahay shuruudaha loo shaqeeyaha ku siiyay.
Waa inaad ku xasuusataa taas gudaha UAE. Waxaa jira kumanaan kun oo safar shaqo ah oo shaqo ka raadinaya Dubay ama Abu Dhabi. Haddii aad u maleynaysid inaad tahay musharaxa saxda ah, u soo bandhig macluumaadka naftaada qaab cad oo fikir leh.
Fure u ah abuurista aqoon xirfadeed waa falanqeyn shaqo
Waxaan raadineynaa khabiir ...
Shirkadeena waxay raadineysaa Dhakhaatiirta Dubai
Kahor intaadan ka jawaabin xayeysiiska, ka fikir inaad leedahay xirfadaha saxda ah ee aad ku qaadatid jago gaar ah. Markii la sameynayo falanqaynta, waxaa laga yaabaa inaad gaarto go’aansiga inay mudan tahay in la bilaabo shaqo, tusaale ahaan kaaliye ahaan.
Had iyo jeer hubso inaad codsaneyso xayeysiis shaqo oo sax ah. Tusaale ahaan, U dirista CV-gaaga kumanaanka Loo-shaqeeyayaasha oo raadsan kara takhasuska ilkaha oo khibradaada ku jirta suuqgeynta wax caawinaad ah kaaama geysan doonto waqti kasta.
Mas'uuliyadaha intaad raadineyso shaqo
Falanqaynta baaxadda howlaha loo xilsaaray jagada, waad hubin kartaa inaad awoodo iyo in kale u fuliso waajibaadkaaga si hufan khibradahaaga iyo kartidaada. Haddii ficillada laga qaaday shirkadihii hore ay la mid yihiin shuruudaha lagu sheegay ku dhawaaqida, markaa waad leedahay fursad aad kula kulanto shaqadaada cusub. Waa muhiim inaad tusto CV-gaaga inaad leedahay aqoonta iyo xirfadaha lagama maarmaanka ah.
Ugu yaraan waayo-aragnimo x sano ah oo boos la mid ah. Waxay dhacdaa in loo shaqeeyayaashu aysan filayn khibrad. Xaaladda jirta, waxaa mudan in xoogga la saaro sharaxaadda waxbarashada iyo xirfadaha. Badanaa, hase yeeshe, ku celcelintu waa muhiim.
Si aad u muujiso inaad horay u soo qabatay jagooyin la mid ah waxa aad hada dalbatid, sharax taariikhdaada shaqo adigoo bixinaya cinwaanka shaqada, waqtiga shaqada, iyo xilalka. Waa muhiim in waxyaabahaas ay iswaafaqsan yihiin iyadoo howlaha lagu tilmaamay soo bandhigida shaqada.
Waxbarashada ... / ogolaanshaha ...
Kalkaaliye caafimaad, injineer dhisme, macalin - kuwanu waa tusaalooyin xirfadaha la xakameeyay, tusaale ahaan kuwa la sameyn karo oo kaliya haddii aad leedahay xuquuqaha. Sidoo kale marka la eego xirfadaha kale, sida shaqaale PR, ganacsade ama programmer, loo shaqeeyuhu wuxuu xaq u leeyahay inaad ka filayso waxbarasho gaar ah murashaxa.
Kaliya muhiim maahan nooca waxbarasho ee aad soo dhameysay. Waxaa kale oo mudan in la xuso koorsooyinka iyo qaybo tababar ah muddadaas oo aad ku soo korodhsatay oo aad horumarisay xirfadihii lagama maarmaanka u ahaa shaqada. Farshaxanka garaafka ah, waad qori kartaa, tusaale ahaan, ku saabsan koorsooyinka maaraynta barnaamijyada, sida Adobe Photoshop, InDesign ama Corel Draw. Markaad dalbaneysid boosteejo shaqsiyeed, daraasado postgraduate ah oo xagga maadada cuntada ah, iwm ayaa faa iido yeelan doonta.
Aqoonta barnaamijyada kombiyuutarka sida ...
Shahaadooyinka waxaa loo isticmaali karaa in lagu bixiyo xirfado gaar ah oo softiweer ah. Boortafooliyada ayaa ku lifaaqan CV-gaaga Waxaa kaloo loo isticmaali karaa in lagu xaqiijiyo aqoontaada.
Aqoonta luuqad shisheeye heer ...
Waa muhiim in waxaad sheegaysaa heerka horumarka - Tani waxay quseysaa oo keliya aqoonta luqadda laakiin sidoo kale aqoonta aqoonta barnaamijyada kombiyuutarka. Si loo helo xaqiijinta xirfadaha luqadda, waxaa haboon in laga gudbo imtixaanka shahaadada. Iyadoo qayb ka ah diyaarinta, waxaad aadi kartaa koorso aad ku baran doonto, tusaale ahaan, xeeladaha imtixaanka.
Wada-xiriir, karti aad naftaada ku maareyn karto waqtiga… - xirfadaha jilicsan Waxaa mudan in la daryeelo taas, Natiijooyinka ka soo baxa falanqaynta CV-gaaga, shaqaaleeyuhu wuxuu ogaaday inaad tahay, tusaale ahaan, abaabushay. Xaqiijinta kartida noocaas ah laga yaabee xitaa abaabulka shirarka ama isu imaatinka shaqo iyo waxbarasho. Waa muhiim in la kala saaro kuwa sida ugu badan ula jaan qaada dhaqanka hay'adda ee shirkadda iyo xirfadaha jilicsan ee aad leedahay.
Marka la abuurayo CV, waxaa mudan in la tilmaamo mid dheeri ah, ikhtiyaari ah shuruudaha uu sheegay loo shaqeeyuhu. Tani waxay noqon doontaa hanti go'aamin kara in laguugu oggolaado inaad shaqeyso.
Haddii aad aragto - Waxaanu siinaa boosaska banaan ee Dubai ...
Markaad aqriso qaybta ugu dambeysa ee ogeysiiska, waxaad fursad u leedahay inaad aragto haddii shuruudaha uu bixiyo loo shaqeeyuhu kaa caawiyo inaad gaadho yoolalkaaga. Haddii aad u maleyneyso haa, waxaa mudan in lagu xuso soo koobitaanka xirfadleyda.
CV la safeeyey ayaa ku siin kara wareysi taasna waxay keentay inaad ku biiriso xaqiiqda ah in laguugu oggolaado inaad shaqeyso. Tirada CVs loo diray ka jawaab celinta xayeysiisyada ayaan ansax ahayn; Waxa ugu muhiimsan waa tayadooda. Raadinta ayaa ah waxtar badan haddii CV-gaaga shaqsiyeed. Marka la abuurayo dukumenti, waxay mudan tahay in taxaddar laga yeelo waxa ku kooban oo keliya laakiin sidoo kale foomka - hab wanaagsan oo daahfuran. Waxaad abuuri doontaa dukumenti xirfad leh adeegsiga shirkadaha Dubai CV abuuraha.
Maxay CV ku xaqiijineysaa guusha 2020?
Hal-abuurnimo iyo weliba hadal run ah. Casri ah, laakiin lagu daro qaab dhaqameedka. Asal ahaan, laakiin si fudud. Si la yaab leh, laakiin ma ceebsan. Si sax ah, taas micnaheedu maahan caajis. Waxaan kugula talinaynaa sidaad u cusbooneysiin lahayd CV-gaaga sannadka cusub si aad u soo jiidato dareenka shaqaaleysiinta.
Maalin walba codsi ayaad dirtaa, laakiin wax jawaab ah kama bixin ?. Ma garanaysid waxa dhibaatadu tahay? Waxaa laga yaabaa inaad si macquul ah u fiiriso CV-gaaga, iyo sida ugu fiican haddii aad siiso qof si uu u akhriyo ama u ogaado luqadda Ingiriisiga ee saxda ah. Sida ay sheegeen khubarada HR, dhaqankan waa mid aad u qiimo badan. Badanaa, dukumiintiyada dalabka waxaa ka buuxa luqado, stylistic, higaadin iyo qaladaad sax ah.
Gaar ahaan, jiilka Y hadda waxay diiradda saareysaa resume hal abuur leh, laakiin iloobaa inaad ilaalisid qawaaniinta hingaadka saxda ah iyo sameynta qaladaadka naxwaha aasaasiga ah - dheh, John Smith, Madaxa Shirkadda Dubai City Company
Wax ka badan dukumenti
CV-ga oo ah nooc xaashi xayeysiis ah, buugga majaajillada ah ama fiidiyaha. Tusmada lagu muujiyey calaamadaha, calaamadaha, sawirrada. Adkeynta macluumaadka infographic. Dharka noocan oo kale ah ayaa hadda ka muuqday codsiyada. Dad aad u tiro badan ayaa ula dhaqmaya CV-gaaga wax dalab ah oo aan ahayn sidii dokumenti ahaan.
Hal-abuurka noocan oo kale ah waa mid aad loo soo dhoweynayo, laakiin shuruudda ah in wixii qurxinta ka baxsan iyo qaabka lumay, ay sidoo kale jiri doonaan macluumaad muhiim ah. Shaqaale qorista, daahfuristu waa muhiim, xog gaar ah oo ku saabsan meesha iyo goorta qof shaqeeyay, wuxuu qabtay, shaqooyinka uu qabtay iyo khibrada uu kasbaday.
U janjeerida gaabinimada CV ma aha mid keenta natiijooyin faa'iido leh - John ayaa sharraxay. Fikradiisa fikrad xiiso leh waa in lagu diyaariyo CV qaab dhaqameed oo lagu daro isku xirka mashruucyadaada, faylalka aad ku qoran tahay ama websaydhka aad ka arki karto horumarka sawirada dukumiintiga, tusaale ahaan majaajillo ahaan.
Xirfadlayaasha HR ayaa waliba dareensan in lacag badan laga qaado dalabaadka cusub ee tikniyoolajiyadeed. - Shaqaale kasta oo qoran ma isticmaali karo, tusaale ahaan, inuu isticmaalo koodhadhka QR iyo codsiyada mobilada ee oggolaanaya akhrinta CV-yada. Way ka wanaagsan tahay in lagu daaweeyo sida wax lagu daro, wax ka baxsan xalka caadiga ah - wuxuu ku nuuxnuuxsaday John Smith.
Sideed uga soo dhex bixi kartaa dadkii badnaa? Waa maxay, ka sokow macluumaadka khaaska ah, hada dusha ayuu saaranyahay?
Website-kiisa - waxaan ku qori karnaa macluumaad dheeraad ah marka loo eego CV-dhaqameedka, muujiya dareenkaada iyo xirfadahaaga.
Xisaabaadka albaabada shaqaalaysiinta (sida koontada My Work) waa mid ka mid ah meelahaas oo ah shabakada nagu xirta maamulayaasha mustaqbalka. Way u qalantaa cusboonaysiinta dokumentiyadaada halkan sanadka cusub.
CV-ga qaab muuqaal ah - Tani waa hab xiiso leh oo lagu soo bandhigo shirkaddaada riyada, laakiin hadaan cabsi ka qabno kaamirada horteeda, waxaan dhib ku qabnaa khayaaliga iyo sifiican, hadalka xorta ah - ha ku qasbin naftaada foomkan.
Warbaahinta bulshada - waa soo booqday madax-madax, marka waxaa haboon in la daryeelo muuqaal xirfadle ah. Kaliya maaha warbaahinta bulshada ee warshadaha waxay kaa caawin kartaa raadinta shaqo. Qaar ka mid ah sheekooyinkooda shaqo ayaa sidoo kale lagu soo bandhigaa bogagga Facebook.
Sharraxaya dhacdooyinka ama mashruucyada aan ka qeybgalno, wadaagida guulaha xirfadeed - waan kala soo bixi karnaa indhaha qoryaha. Wax xoog ah maahan
Daawashada HR ee Suuqa Shaqooyinka ee Dubai waxay muujineysaa in hal abuur leh, resume aan caadi aheyn ay dhacaan warshadaha kala duwan. Waxaa lagu qiimeyn karaa iyadoo la dalbanayo jagooyinka u baahan hal abuurka iyo xariifnimada, sida suuq geynta ama takhasuska xayeysiinta, khabiir ku ah adeegga macaamiisha ama barnaamij barnaamij taleefanka gacanta, kaasoo soo bandhigi doono CV-ga, tusaale ahaan qaab ciyaar kombuyuutar ama bog internet. Sidookale, infographic will will ka shaqee goob kasta oo hal abuur leh.
Si kastaba ha noqotee, haddii aan dareemayn xoog xoog leh oo aan kaga hadalno khibradeena xirfadeed ee fiidiyowga ama sawirista majaajillo majaajillo ah - Aynu iska daayo oo ha iska daayo uun isbadalada. - Mararka qaarkood resumeygu waa uun nuqul aan khaldanayn, oo ah nuqul shaasha ah. Shaqo xumo ayaa hoos udhacaysa musharraxa - John Smith ayaa indha indheeyay.
Crazy But True - Leaflet halkii Cv!
Bixinta waraaqaha waraaqaha ma aha inay tahay shaqo marmar ah! Waxay noqon kartaa waddo si aad shaqo uga hesho Yurub. Waxaa cadeeyay David Dąbrowski oo ah ganacsade reer Poland ah oo dhiibey waraaqo waraaq u soo bandhigaya inuu isu sharrax u yahay shaqada xafiisyada Warsaw.
Pracuj.pl wuxuu weydiiyaa David haddii fikradu soo leexatay inuu noqdo qof wax garaaca oo helay shaqadiisa riyadiisa.
Siyaabaha loo abuuro inay shaqo helaan way kala duwanaan karaan. Marka dadku ay ku yaallaan boodhadh la midabtakooda ama abuuraan fanaanada Facebook, David ayaa go'aansaday in ... wargeysyada! Waxay shaqeysay?
Waad ahayd shaqo raadinta qaab aan caadi ahayn…
David Dąbrowski: Ma ogi inay si buuxda u caadi ahayn. Waxaan ku hayaa aragti ah in qaabka aan adeegsaday ay caan ku tahay, in kasta oo ay dhab ahaantii dadka adeegsadaan in la raadsado shaqo badanaa lama arko.
Sidee dhab ahaantii u muuqatay?
David.: Waxaan dhiibey waraaqo yar yar (qosol). Laakiin maaha uun waraaqo kasta. Waxaa lay tusay sawirro mihnad leh, intaas waxaa sii dheer waxaan aniga iyo faahfaahinta laxiriira aniga iyo lambarka QR-ga ku dhejiyay hal dhinac waraaqda u gudbinta astaanteyda xirfadleyda, dhinaca kalena dib ugu bilaaba warbaahin fara badan. Hagaag, waxaan bixinayay wax uun maahan, maxaa yeelay inta u dhaxaysa 8 iyo 9: 30 aroortii albaabada laga soo galo dhismayaasha xafiiska ugu weyn ee Warsaw, shaqaale hurdo leh oo dhoola cadeynaya bushimahooda. Kuwo badan oo ka mid ah, ka dib markay heleen waraaqda, ayaa waliba dhoola cadeeyay.
Halkee ayaa fikrad ka ahayd foomkan?
David.: Waxaan jeclahay in aan waxyaalahaas oo kale sameeyo! Waxaan shaqo ka raadinayay suuqgeyn. Ficilkan waxaan rabay inaan muujiyo inaan ahay hal abuur, u fikir ahaan fikir ahaan, fikradeyda waxay diirada saarayaan gaarista yoolalka gaarka ah iyo abuurida shucuurta gaarka ah. Foomku wuxuu ahaa inuu caddeeyo taas Waxaan ahay shaqaale riyo u ah shirkad kasta. Intaa waxaa sii dheer, ma jiraan wax ka sii xun marka la raadinayo shaqo sida shaqo la’aan iyo sugitaanka emayllada aan qulqulka ahayn. Waxaan rabay inaan sameeyo wax hal abuur leh, ka bax afar gidaar. Waxay ahayd waayo-aragnimo weyn.
Si kastaba ha ahaatee, waa inaad ku maalgelisaa xalkaas oo kale ...
David.: Buug-yaraha aniga ayaa qaabaynaya, sawirrada waxaa qaaday sawir-qaade saaxiibkey sawir qaade ka dib sicir-dhimis, waxaan sameeyay astaan ​​xirfad-yaqaan ah waxaan kaloo sameeyay CV-ga telefishanka anigaa iska leh, laakiin daabacaadda waxaa horay u xilsaaray guriga daabacaadda. Sidoo kale, qiimuhu si gaar ah uma sarrayn, inkasta oo ay ahayd maalgashi PLN 1,200. Ma dafiri karo hanaanka diyaarinta waraaqaha waxay igu qaadatay ku dhawaad ​​seddex isbuuc oo shaqo maalmeedka ah saacado yar kadib. Laakiin waxay mudan tahay in waqtigan la isticmaalo.
Maxay ahaayeen natiijooyinka?
David: natiijooyinka waxay ahaayeen kuwo cajiib ah. Marka laga soo tago jawaab celinta tooska ah ee qaataha warqadaha, kuwaas oo inta badan ahaa mid aad u wanaagsan, waxaan ku helay iimayl badan oo hambalyo fikradda ah. Waxay ii ahayd muhiim maxaa yeelay haddii qofku shaqo raadsado, caadiyan si fiican uma dareemayo.
Taasi waxay ahayd dhiirigelinta loo baahan yahay. Waxaan sameeyay wadarta waraaqaha 1000, waxaan ku guuleystey inaan iska bixiyo shan boqol usbuuc iyo badh, ka dibna wax badan kama bixin, sababtoo ah dhowr maalmood kadib bilowga ololaha I ayaa bilaabay in lagu casuumo wareysiyada. Waxaa jiray tiro dhan oo ka mid ah, qaar ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee Poland.
Sidee ugu dambeyntii shaqo u heshay?
David.: Waxay umuuqataa wax la yaab leh, laakiin Waxaan shaqo helay mahadsanid Shirkadda Dubai City Company (qosol). In kasta oo aan ka helay dhowr shaqooyin mahadnaq waraaqo ah, waxay ahayd Shirkadda Dubai City oo aan la xiriiray cidda aan u shaqeeyo hadda. Wuxuu ahaa kan i siiya shuruudaha ugu fiican mana ka labalabeynin inaan go'aan ka gaadho ka shaqaynta shirkaddayda hadda jirta.
Haddii ay jirto baahi, ma ku celin lahayd tijaabadan?
David.: Waxaan sameyn doonaa wax walba si aan uga hortago baahidan, laakiin hadii laygu qasbo in aan sidaas sameeyo, waxaan sameyn doonaa wax xitaa ka sii yaab badan. Waxaan jeclahay inaan sameeyo waxyaabo kuwa kale aysan sameynin!
Maxaa talo ah ma siin lahayd kuwa maanta shaqo ka doonaya Yurub?
David.: Haddii aan lahaan lahaa in wax laga qabto, taasi way ahaan laheyd. Samee waxa kuwa kale aysan sameynin, rumeyso naftooda iyo haddii aad geliso dhamaan xamaasadaada, hibadaada iyo waqtigaaga wax xitaa kuwa ugu fudud mid, waxbadan ayaad sameyn kartaa.
Waxyaabaha 8 ee ku adkeynaya helitaanka shaqo
Carqalad helitaanka shaqo waxay noqon kartaa mid aan ku filnayn ama aqoonsiyo aan ku filnayn. Wax badan ayaa sidoo kale ku xidhan aragtidaada. Sidoo kale tixgeli haddii aysan jirin dhambaallo ka imanaya shaqaaleeyeyaasha aan lagu soo dirin adoo diraya CV aan shaqsiyeed.
1. Go'aan yar oo shaqo raadin ah
Dhibaatooyinka helitaanka shaqo waxaa laga yaabaa inay ugu wacan tahay ku lug lahaanshahooda oo aad u yar, tusaale ahaan, si aan caadi ahayn u dirista CV-gaaga. Waa muhiim in si habsami leh loo baaro shaqooyinka la helo, tusaale ahaan Bayt.com Xariir - adoo adeegsanaya arjiga mobilada ayaa kuu oggolaanaya inaad xayeysiiso xayeysiiska meel kasta, waqti kasta. Kahor intaanad u dirin CV, iska hubi inaad aqriso shuruudaha loo shaqeeyaha oo aad shaqsi ahaantaada CV-gaaga si ay ugu habboon tahay u fidinta gaarka ah. Haddii aqoontaadu aysan ku filneyn dalabyada badankood, Tani waa macluumaad qiimo leh - waa inaad diirada saartaa horumarinta kartida si aad shaqo uga hesho warshadaha aad xiisaynayso.
2. Khaladaadka iyo khaladaadka ku jira CV
Loo shaqeeye mustaqbalka dhow ka baqi kartaa khaladaadka CV-gaaga. Fadlan si taxaddar leh u hubi tusmada kahor intaadan dirin dukumiintiga. Fadlan la soco inaysan jirin khaladaad xagga edeynta ah, higaadin ama khalad.
3. Xogta lagama maarmaanka ah ee CV
Dhibaatada helitaanka shaqo waxay noqon kartaa awood la'aanta in lagula soo xiriiro. Lambarka taleefanka iyo cinwaanka e-maylka waa in lagu daraa CV-ga. Hadaad iska ilow, shaqaaleeyaha ma awoodo inuu ka jawaabo dalabkaaga.
4. Cinwaanka aqbalida ee dokumentiga
Intaadan dirin CV-gaaga, marwalba iska hubso inaad gelisay cinwaanka e-maylka saxda ah. Laga yaabee in shirkaddu aysan ka jawaabin dalabkaaga sababta oo ah - tusaale ahaan, warqad qaldan darteed - ma aysan helin dukumintiga saxda ah haba yaraatee.
5. Ma laha xirfado ku filan oo loo baahan yahay
Carqalad shaqo helista sidoo kale waxay noqon kartaa ku guuldareysiga buuxinta shuruudaha rasmiga ah. Haddii shirkaddaadu u baahan tahay aqoon Jarmal oo aad ku dhawaaqdo kaliya Ingiriisiga, doorashadaada waa la diidi karaa. Kahor intaadan CV-gaaga dirin, Hubso in xirfadahaagu ay isbarbar dhigaan waxyaabaha loo shaqeeyaha.
6. Khibrad la'aan / shahaadooyin aad u sareeya
Dhibaatooyinka helitaanka shaqo waxaa ka dhalan kara la'aanta khibrad xirfadeed ama shahaadooyin aad u sarreeya. Haddii shaqaaleeyaha uu raadinayo qof oo leh ugu yaraan 3 sano oo waayo-aragnimo ah, wuxuu u badan yahay ma casuumi doono murashax hadda dhameystay waxbarashadiisa. Mararka qaarkood, waayo-aragnimo badan ayaa caqabad ku noqon karta.
Loo shaqeeye garanaya in shahaadooyinkaagu ka sarreeyaan baahidiisa ama baahideeda ayaa ka baqay inaad dhaqso uga joojiso shaqada in la raadiyo caqabado waaweyn iyo fursado xirfadeed.
7. Dabeecad aan habooneyn inta lagu jiro waraysiga
Way shaqeynaysay - CV-gaaga xiiseynaya shaqaaleeyaha in ku filan oo uu kugu casuumay wareysiga. Natiijadiisu waxay kuxirantahay aragtidaada - hadii aad edeb xumo, waxaad waayi doontaa fursaddaada shaqo. Waqtigaaga, aqoonta waxqabadka shirkadda iyo himilooyinka shaqooyinka saxda ah ayaa muhiim ah.
Waxaa sidoo kale lagaa codsan karaa inaad xalliso hawl, sidaa darteed u diyaari inaad sameyso. Haddii ay ku jirto dadaalkaaga, ma heleysid dalab shaqo ah, soo-gebogebo gabagabo ah - waxay noqon doontaa mid waxtar leh inaad weydiiso qoraaga si ay uga jawaab celiso ku-sheegistaada. Waxaa suurtagal ah in qof kale oo codsanaya booska la siiyay uu si fiican u soo bandhigay dhaqanka ururka ee shirkadda.
8. Caqiido la'aan la'aanta awoodaha
Haddii xirfadahaaga iyo waayo-aragnimadaadu xiiseeyaan shaqaaleysiinta, waxay ka dhigan tahay inaad fursad u leedahay booska. Markaad tusto kalsooni darradaada, isku kalsooni la'aantaada iyo inaad ka cabsaneysid mashaariic, waxaad waayi kartaa fursadaada shaqo. Si aad u kordhiso kalsoonidaada, ka fikir awoodahaaga iyo aqoontaada - waa iyadu mahadleh taas waad qabsan kartaa shaqadaada riyada.
Sidee loo soo koobayaa aniga iyo noloshadaada xirfadlaha ah, laakiin si nasiib ah?
CV-gu waa inuu soo koobaa guulahaagii hore. Waa inay tixgelisaa sharraxaadda waayo-aragnimo xirfadeed iyo xirfado. Saddexda erey waa furaha: gaar ahaan, si isdaba joog ah iyo mowduuca.
Qodobada ugu muhiimsan ee CV
CV-gaagu waa bandhigaada. Waa inayna noqonin mid hufan oo karti leh, laakiin waa inay ka madaxbanaan tahay nooc kasta oo qaladaad ah - hufnaan leh, higgaadin iyo hufnaan. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee ay tahay inaad ku dhejiso resume-gaaga ayaa lagu soo daray hoosta.
CV waa inuu ku jiraa magaca iyo magaca qoyska, iyo sidoo kale faahfaahinta kuu sahli karta inaad la xiriirto: lambarka telefoonka iyo cinwaanka e-mail. Waxaa muhiim ah in aad isticmaasho cinwaanka e-mail xirfadlaha ah.
CV-ga waa inuu lahaadaa liistada jagooyinka horey loo hayey - gaar ahaan kuwa cadeeya aqoonta warshadaha. Waxaa mudan in si kooban loo sharraxo, iyada oo la sheegayo baaxadda waajibaadka. Jagooyinka shaqada ku jira waa in lagu soo bandhigayaa nidaamka taariikhda soo celinta - laga bilaabo shaqadii ugu dambeysay ee la qabtay.
Qaybtan resumeygu waa inay kujirtaa macluumaad ku saabsan, aqoonta kale ee luqadaha qalaad iyo aqoonta takhasuska leh. Sidoo kale waa mudan tahay in la xuso xirfadaha jilicsan - gaar ahaan kuwaas taasi waxay waxtar u yeelan doontaa shaqo suurta gal ah.
Liisaska koorsooyinka la dhammeeyey iyo shahaadooyinka la helay
Hadaad kaqeyb qaadatay koorsooyin dheeri ah iyo tababar - kuqor CV-gaaga. Inta badan diiradda saar howlahaas taasi waxay waxtar u yeelan kartaa booska aad xiisaynayso.
Ula jeedi hadafka xirfadeed
Haddii aad ku gudajirto sameynta CV, waxaad qori kartaa jumlado dhowr ah oo ku saabsan himiladaada shaqo. Soo bandhig waxa ay yihiin qorshayaashaada horumarka sii fiican, sharax waxa aad higsaneyso. Taas waad ku mahadsan tahay, waxaad tusi doontaa loo shaqeeyaha suuragalka ah inaad adigu fikrad u lahaw naftaada oo ogow waxa aad rabto inaad ku guuleysato mustaqbalka.
Xeer muhiim ah - cusboonaysiinta xogta
CV-ga xirfadleyda waa in lagu cusbooneysiiyaa si ku saleysan qaab joogto ah. Waa in lagu waafajiyaa shaqo gaar ah oo la soo bandhigo, adkaynta astaamaha iyo xirfadaha ay rabaan loo shaqeeyaha mustaqbalka.
Daacadnimada Dubai ee ka sareysa dhamaanba dadka kale
Macluumaad been ah laguma dari karo resumeyga. Ha ku darin xirfadaha aadan lahayn. Been ayaa iftiimin doonta markii kartida lagu tilmaamay waa laguu xaqiijin doonaa.
Qalab wax ku ool ah - abuuraha CV online
Abuuraha CV wuxuu kaa caawin karaa diyaarinta resume buuxa, oo la aqrin karo. Waad ku mahadsan tahay ma illoobi doontid ku meeleynta waxyaabo muhiim ah dukumintiga. Waxaad sidoo kale daryeeli doontaa dhinaca aragtidiisa. Xusuusnow in CV-gaagu uu yahay marinkaaga si aad u hesho shaqadaada riyada.
Sidee u istaagaan oo abuurtaa CV asalka ah?
Taariikhda taariikh nololeed ee aad siiso loo shaqeeyaha ayaa wax badan ka sheegaya adiga. Waad ka aqrisan kartaa bal inaad fiiro gaar ah u siiso faahfaahinta, inaad sax tahay iyo… hal abuur.
Dib-u-gurasho aan caadi aheyn oo ku takhasusay suuq-geynta suuq-geynta ama naqshadeeyaha gudaha ayaa soo jiidan kara dareenka. Hubi sida aad u muujin kartid caqligal ahaan adoo codsanaya, iyo kuwa kale, ee booska ilmo ilaaliye, cunto kariye ama timo jare.
CV-ga asalka ah ee muuqaalka qurxoon, ama maxaa?
Macluumaadka joornaalka, resumeyga qaab filim filim ah - warshadaha qaar taariikh nololeed aan caadi aheyn ayaa ina kala saari kara. Si kastaba ha noqotee, waa inaad noqotaa qof xasaasi ah oo ka fiirsada bal inaad Xalkan ayaa runtii ku habboonaan doona.
Murashax kastaa ma aha inuu doorto CV aan caadiga ahayn. Ha iloobin in maadada ay ka muhiimsan tahay qaabka. Xirfadaha ay xoogaa dhiirranaan iyo hal-abuurnimo aan dhaawici doonin, tusaale ahaan:
Khabiirka suuqgeynta ayaa la filayaa inuu awoodo inuu soo jiito macmiilka. Si aad ugu qanciso loo-shaqeeyahaaga inaad iibin karto oo aad horumariso… naftaada kor u qaad. Tusaale ahaan, waxaad ku bixin kartaa CV qaab muuqaal fiidiyow ah.
Hal-abuurka ayaa sidoo kale muhiim u ah naqshadeeyayaasha gudaha. Markaad shaqo ka raadineyso xirfaddan, waa inaad ku sharaxdid resume shaqeynaya oo leh qaabeyn ka kooban qaab aan caadi aheyn. Dukumintiga waa inuu kujiraa sawirro xirfad leh oo ah mashaariicda hore loo dhammeeyay.
Daryeelaha / Macallinka CV
Ma waxaad tahay macalin luuqad qalaad u sameeya casharada carruurta? Ama laga yaabee waxaad codsaneysaa shaqo Ma tahay macalin iskuulka hore ah? Waxaad ku tusi kartaa qaab hal abuur leh iyo, tusaale ahaan, waxaad ku abuuri kartaa CV qaab farshaxan-gacmeedyo (xiro ama qurxin).
Hal-abuurka sidoo kale waa muuqaal aad u muhiim ah sidoo kale loogu talagalay xirfadlayaasha iyagu naftooda u huray farshaxanka. Si aad u muujiso xariifnimadaada, waxaad siin kartaa loo-shaqeeyahaaga CV sawirro xirfadleyaal ah oo weelka lagu sameeyo iyadoo la raacayo sida aad u isticmaasho asalka. Waxaad kaloo isku dayi kartaa inaad ku qorto taariikh nololeed sida… buug-kariska.
Ama waxaa laga yaabaa inay mudan tahay in loo diro loo shaqeeye mustaqbalka keeg weyn oo aad “ku qori karto” xirfadahaaga adoo u adeegsanaya jiing ujeedadaas? Waxa kale oo aad ku karisaa buskud si lama filaan ah oo aad qarinaysid CV-gaaga.
Fanaan farshaxan / sawir gacmeed CV
Fannaanka farshaxanka ee 'CV' wuxuu noqon karaa midab iyo firfircoon, laakiin waqti isku mid ah oo hufan. Way u qalan tahay inaad ku dhejiso arjiga iskuxirka boortafooliyada, taas oo loo shaqeeyuhu uu ku arki karo, tusaale ahaan, filimo aad ka samaysan tahay oo aad ka soo kaban karto.
Alaabta fara badan waxaa lagu dhejin karaa CV-gaaga sidoo kale markaad codsanaysid booska timo jaraha. Waxaad naftaada u oggolaan kartaa inaad sawir ka qaadato shaqadaada dukumeentiga. Waa muhiim in sawir qaaduhu uu yahay xirfad, tusaale ahaan, si fiican u iftiimaya, la jaray, iwm.
Hubso in hal-abuurkaagu aanu qarinayn xirfad-yaqaannimada. CV qiimo leh ma aha oo kaliya wax la xasuusto, sidoo kale waa wax la aqrin karo oo ka kooban macluumaad muhiim ah oo ku saabsan khibrada, xirfadaha iyo yoolalka xirfadeed. U abuuro resume xirfad-yaqaanimo ah adoo isticmaalaya saaxir Pracuj.pl.
Waxa loo qoro CV-gaaga markaad waayo aragnimo u lahayn
Qoritaanka CV-ga shaqada koowaad waa caqabad weyn dadka badankood. Si aad si sax ah u sameyso, waxaad u baahan tahay inaad hesho wakhtiga oo aad madaxaaga dejiso - maqaalku wuxuu kaa caawin doonaa inta kale
Akhbaarta wanaagsan ee bilowga - inta badan waxyaabaha lagama maarmaanka u ah in la abuuro resume waa madaxaaga. Markaad samaynayso CV-ga, waa inaad gaadhaa gulucda iyo xasuusta xusuustaada iyo naftaada ka fikir, noloshaada iyo khibradahaaga xirfadeed iyo awoodahaaga iyo hamigaaga.
Ka bilow Waxbarashada - Dugsiga la dhammeeyey
Qeybta "waxbarashada" qaybta waxbarashada, waxaan dhignaa daraasad joogto ah ama dhamaystiran (bachelor, master, cilmi baarista, iwm) ama dugsi farsamo oo dhameystiran. Waxaan kaloo ku dari karnaa macluumaadka ku saabsan isdhaafsiga ajnabiga.
Dugsiyo cusub ma galno - dugsi sare, dugsi hoose ama dugsi hoose. Waxa ka reeban ayaa noqon doona dugsiyada sare, oo sumcadooda iyo heerkeedu muujinayo in la helay xirfado dheeraad ah, tusaale ahaan, dugsi sare oo leh luuqad Isbaanish ah.
Khibrad xirfadeed ee CV
Haddii aad hore u khibrad shaqo u leedahay, si sax ah u sharax waxa aad soo baratay iyo xirfadihii aad soo baratay. Waxaad waayo-aragnimadaada ku baran kartaa tababar-qaadashadaada, shaqooyinkaaga iyo shaqooyinka aan caadiga ahayn.
Si kastaba ha noqotee, haddii aad hore u leedahay khibrad ballaadhan oo la xidhiidha waxbarashadaada ama mustaqbalkiisa shaqo, ma geli doontid shaqooyinka xun ama shaqooyinka xilliyeed ee CV-gaaga. Xooga saar sharraxaya guulaha xirfadeed ee hore.
Hawlahaaga inta lagu jiro waxbarashadaada waa nooc ka mid ah waayo-aragnimada aad heshay. Ka faa'iideysiga guulahaaga "qaybta howlaha dheeraadka ah".
Awoodaha iyo xiisaha CV
Xayeysiinta shaqada, shuruudaha xirfadaha jilicsan ee murashaxa ayaa inta badan la siiyaa. Qof noocee ah shirkad la siiyay ayaa raadinaya, sidoo kale waad ka takhalusi kartaa dhaqanka ururkiisa iyo falsafadiisa, oo lagu sharaxay Tababbarka Shaqo-bixiyaha iyo si toos ah websaydhada goobo shaqo oo badan oo ku yaal Dubai iyo Abu Dhabi.
Awooddaada iyo jilicsanaantaada, oo ku xiran rajooyinka shaqo-bixiyeha, galaan qaybaha ku haboon ee CV-gaaga.
Kadib markaad ka fikirto naftaada, wakhtigu wuxuu yimid talaabada ugu dambeysa, kaas oo kuu diyaarin doona inaad abuurto CV wanaagsan. Isku soo ururi waxyaalahan, fadhiiso kombiyuutarka iyo ... diyaar :)!
Sawir xirfadeed oo loogu talagalay CV
Muuqaal wanaagsan oo CV ayaa muujinaya musharraxa laga soo bilaabo garabka, on asal jilicsan iyo dhoola cadeyn. Waa inaad xirataa shaati ama sariir jilicsan oo dhexdhexaad ah oo loogu talagalay sawir ganacsi. Xusuusnow sawirro tayo sare leh. Haddii aadan wali sawir lahayn, ha walwelin - waad u diri kartaa CV bilaa sawir ah. Ahaanshaha bilowga meheraddaada, waxaa habboon inaad sawir noocaas ah qaadatid - waxay waxtar u yeelan doontaa mustaqbalka. Waad adeegsan kartaa adeegyada sawir qaadaha ama waxaad ka qeybqaadan kartaa kalfadhiga ganacsiga lacag la’aan, taas oo ah cunsur soo noqnoqda dhacdooyinka ardayda ama xafladaha shaqada.
Shahaadooyinka koorsooyinka la dhammeeyey, shahaadooyinka la helay, abaalmarinta iyo kala qaybsanaanta CV
Ururi kuwa runtii horumariyey Adiguna waxaad u noqon doontaa hanti loo-shaqeeyaha. Hadaad xasuusato taariikhda dhamaadka kooraska iyo qabanqaabiyeha, maahan inaad raadiso asalka. Haddii aadan hubin, markaa u tag dukumentiyada la soo ururiyey.
Qor taariikhaha iyo baaxadda mawduuca koorsada, tababarka. U muuji waxyaabaha dhab ahaantii leeyihiin ku horumariyo oo tilmaami xirfadahaaga aad heshay.
Tusaale wanaagsan oo CV ah waxaa ka mid ah magaca tababarka, qabanqaabiyaha, taariikhda iyo qiyaasaha mowduuceed ee aad ka qaadatay dugsiga ee Dubai.
Sida loo helo khibradda koowaad iyo kobcinta CV-gaaga?
Muxuu hiwaayad u dhigan wakhtiga lacag la'aanta ah inuu sameeyo sameynta shaqada ugu horeysa? Waa maxay xidhiidhka u dhexeeya qorista shirkaddaada riyooyinka iyo waxqabadyada munaasibka ah inta lagu jiro fasaxyada?
Waa maxay muhiimada abaabulka munaasabad sadaqo ah, xaflad arday ama shirar saynis ah oo loogu talagalay ganacsiga? Waxaa soo baxday in waxaas oo dhan door weyn ayuu ka ciyaaraa! Loo shaqeeyayaashu waxay qiimeeyaan musharixiinta firfircoon, ka go'an oo tamar buuxda leh.
Maxay yahiin wax ku oolin doona CV-gaaga Dubai?
Ma leedahay xirfado ama waxyaabo aan caadi ahayn? Ama laga yaabee inaad guuleysatay Abaalmarin lagu bixinayo tartanka warshadaha? Markaad samaynayso CV, fadlan u sheeg cidda aad u shaqayso. Hubso in sawirkaagu uu la socdo dukumiintiga shaqaalaysiinta.
Inbadan oo aad taqaanid oo aad ogtahay, fursadahaaga weyn ee helitaanka shaqadaada riyada. Waa muhiim inaad taqaanid sida loo soo bandhigo awoodaha aad leedhay. Si aad CV-giisa uga dhigto mid soo jiidasho leh, ku dar waxyaabo ay ka mid yihiin, tusaale ahaan, taasi waa muhiim in Imaaraadka Carabta.
Guulo gaar ah
Kaqeybgalka tartamada caalamiga ah, abaalmarino warshadeed, hirgelinta mashaariic xiiso leh, la shaqeeya khabiirada ugu fiican - adoo sheegaaya khibradahaas oo kale, waxaad naftaada u soo bandhigi doontaa qof ahaan ku lug leh horumarinta xirfadda. Waa muhiim in macluumaadka aad bixisaa tixraac shuruudaha loo shaqeeyaha.
Jabbaan, Shiine, Kuuriya, Czech, Ruushka, Holandan - kuwani waa tusaalooyin afafka qalaad oo aqoontoodu aad uga yar tahay awooda isticmaalka, tusaale ahaan, Ingiriisiga. Aqoonta luuqadda ugu fiican waxay noqon kartaa hanti weyn iyo kordhinta fursadahaaga suuqa shaqada.
Tabarucid iyo hawlo kale ayaa la qabtay saacadaha ka baxsan saacadaha shaqada.
Tabaruc ma tahay aasaaska? Ama waxaa laga yaabaa waqtigaaga firaaqada ah, miyaad u qabanqaabisaa waxqabadyo isboorti carruurta ama miyaad u dhaqantaa waxtarka bulshada maxalliga ah? Qaadashada howlaha noocaas ah waxay cadeyneysaa inaad awood u leedahay inaad kaqeybqaadatid iyo muuqaal ahaan.
Sidoo kale way fiicantahay in la xuso danaha kaa caawinaya inaad horumariso xirfadaha. Chess wuxuu baraa fikirka macquulka ah. Safarku wuxuu u wanaagsan yahay barashada luuqadaha qalaad. Samaynta moodelku waxay ka marag kacaysaa samirka, iwm.
Waxaa muhiim ah in font-ka lagu xukumi doono noloshaada in la soo bandhigo si daacad ah iyo si macquul ah. Thanks to this, CV-ga ayaa noqon doona mid caqli gal ah. In ka wanaagsan in laga saaro xarfaha sida Courier, Comic Sans ama Vivaldi. Waxaad ku sharxi kartaa, tusaale ahaan, Calibri ama Arial.
Sawir gelinta dukumintiga waxay u sahlaysaa shaqaleeyaha in uu la wadaago guulaha uu gaarayo qof gaar ah. Sawir-xirfadeedka xirfadle ayaa waliba ka dhigi kara dukumiintiga mid u fiican. Sawirku sidoo kale wuxuu kuu horseedi karaa in lagu xasuusto haddii, tusaale ahaan, lagu tusi doono isaga funaanad oo leh hashtag: #task me.
Waxyaalaha garaafka ee dheeraad ah
Astaamaha CV, infographics, jadwalka - soo bandhigida waxa ku jira qaab sawiro iyo qorshayaal ayaa kuu fududeynaya helitaanka macluumaadka la xiriira, sida faahfaahinta xiriirka, shahaadooyinka, iwm. Sawiradu waxay ka dhigi karaan dukumiintiga mid soo jiidasho leh. Isla mar ahaantaana, waxaa mudan in la xusuusto in maaddadan, oo aan ahayn resume, ay tahay tan ugu muhiimsan.
Nooc kastoo midabada aad doorato, CV-gaagu waa inuu noqdaa mid cad oo hufan. Tusaale ahaan, haddii aad shaqo ka dalbaneyso warshadaha mowjadaha, waxaad isticmaali kartaa warbixinnada Pantone oo ay ku qoran yihiin midabada ugu wanaagsan xilliyadii la siiyey.
Ku lifaaq shahaadooyinka CV-gaaga oo xaqiijinaya inaad leedahay xirfadihii aad soo sheegtay. Waad awoodaa dhig meel boortofool ama xariir shabakad leh tusaalooyinka shaqadaada.
Readability kor ku xusan oo dhan
Markii aad ku dhejineeyso waxyaabo kale oo hal abuur leh CV-gaaga, taxaddar. Taariikh nololeedka noqon kartaa mid aan caadi ahayn oo istaagi kara ka codsiyada kale. Waa muhiim, si kastaba ha noqotee, inay tahay mid la fahmi karo oo si cad u cadaynaysa inaad tahay murashaxa saxda ah ee bannaan.
Sidee loo qoraa CV casriga ee nooca Emirates?
Ixtimaalka, waa la akhrisan karaa, kala duwanaansho iyo macluumaad gaar ah oo ku saabsan shaqooyinka la qabtay, heerarka xirfadaha luqadaha ajnabiga ah iyo xirfado kale. CV noocan ah waa in la diyaariyaa sanadka cusub.
Dukumintiga maahan inuu lahaado hal abuur Qaab loo soo jiito dareenka. Waa muhiim in ay ugu horeyn ka jawaab celiso shuruudaha loo dejiyey shaqada shaqada.
CV-gu ma aha inuu aad u dheeraado. Waxaan weydiisan doonaa macluumaad dheeri ah oo ku saabsan kulanka shaqaaleynta. Adoo arkaaya macluumaadka ugu muhiimsan ee lagu muujiyey jaleecada hore - Xaqiiqdii anigu waxaan la joogi doonaa waqti dheer anigoo dukumintigaan oo kale ah. Aad ayaan u mahadcelinayaa marka CV-yada ay yihiin u dhigma shaqada la ii soo diray ee aan dhigey xayeysiiska.
Waxaan hubaa in musharraxa uu isku dayayo in uu aad u adag yahay oo uusan u dirin resumeyaal ballaaran oo dalab kasta ah, laakiin wuxuu si taxadar leh u eegayaa loo shaqeeyaha saxda ah.
Ma diiradda saartaa horumarka? Hadafyadaada ma gaartaa? Ma falanqaynaysaa khibradaada xirfadeed? Miyaad dhibaato ku qabin laqabsashada xaaladaha cusub? Ku qor CV-gaaga adoo adeegsanaya ereyo gaar ah.
Thanks to this, waxaad isu soo bandhigi doontaa oo aad fursadahaaga kordhin doontaa. Waxaa muhiim ah in aad qori kartaan tusaalooyin, tusaale ahaan, waxa loola jeedaa waayo-aragnimo xirfadeed oo muujinaysa in aad leedahay karti-xirfadeed ay ku qiimeeyaan loo-shaqeeyayaasha.
Muxuu CV ku sheegaa musharaxa?
CV-gu wuxuu kuu sheegi karaa inaad tahay qof kaqeyb geli kara, fikrado aan caadi aheynna ku dhiirrigelinaya inuu raacdo qorshayaashaada xirfadeed. Si nidaamsan CV-gaagu inuu ku siiyo shahaado wanaagsan, ha ilaawin waxyaabaha muhiimka ah sida:
Cusboonaysiinta macluumaadka lagu qoro taariikh nololeedkaaga weligeed kama baxo fashion. Markaad bilaabeyso sanad cusub, taxaddar CV-gaaga oo ku dar xirfadaha cusub ee aad heshay iyo aqoonta. Waad sameyn kartaa xitaa haddii aadan ku talo jirin inaad beddesho goobtaada shaqada mustaqbalka dhow. Waa hab fiican oo lagu soo koobo guulahaaga shaqo ee sanadka oo dhan.
Waa wanaagsan tahay marka magaca shirkada uu musharraxu shaqeynayo ama shaqeynayo, qor warqad kooban oo ku saabsan warshadaha loo shaqeeyeha uu khaas u yahay, tusaale ahaan soo saaraha biraaha ama qaybiyaha telefoonada gacanta.
Waxaan kaloo jeclaan lahaa inaan ku akhriyo CV-ga waajibaadka uu murashaxu qabanayo ama Waxa la qabtay loo shaqeeyeyaashii hore oo u dhigma shaqadayda. Looma baahna in la qoro in qof u shaqeynayay sidii sugaye 15 sano ka hor haddii uu hadda yahay murashax farsamo yaqaan adeeg.
Isku duubnaanta muuqaalka iyo xirfadda. Miyaad dooneysaa inaad aragti wanaagsan ka sameyso loo-shaqeeyaha mustaqbalka? Si taxaddar leh u samee astaan ​​shaqsiyeed. Ku dheellitiran xulashooyinka xirfadeed oo horumar gaar ah u qaado. Sidoo kale, Hubso isku xirnaanshaha dukumiintiga shaqaalaysiinta iyo ilaha kale ee macluumaadka adiga kugu saabsan. Fikradda ayaa ah in CV-gaaga, xarafka daboolka, boortafooliyada iyo aragtidaada midba midka kale mid kale ka buuxsamo.
Waxyaabaha muujinaya “kartida berrito”. Ma ku dhex shaqeyn kartaan koox, muujiya dabeecad firfircoon oo awood u leh inaad adeegsato warbaahinta cusub? Ha iloobin inaad ku sheegto CV-ga, isagoo sharaxaya khibradaadii hore ee xirfadeed iyo hawlihii aad qabtay.
Qaabka muuqaalka sawirka CV waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu sharaxan. Haddii uu la jaan qaadayo sawirkaaga, waxaad ku ridi kartaa sawirada dukumiintiga ama waxaad ku sharxi kartaa khibradda adoo isticmaalaya jadwalka. Waa muhiim in daweynta noocan ahi ay saameyn wanaagsan ku yeeshaan oo keliya maahan soo jiidashada laakiin sidoo kale akhrinta sheekada nolosha. - Marka aan akhrinayo CV, waxaa aniga ii muhiim ah in macluumaadka ugu muhiimsan ee kujira in la muujiyo si loo isticmaalo geesinimo iyo hoosta.
Xaqiiqda CV-gaaga gudaha UAE
Ha abuurin muuqaal aan xiriir la lahayn xaqiiqda. Samee naftaada, horumarinta xirfadahaaga adigana noqo naftaada.
CV-gaagu ma ku habboon yahay filashooyinka loo shaqeeyaha?
Abuuritaanka dukumiinti cajaa'ib leh, oo hal abuur leh ayaa kuu keenaya faa iidooyin, laakiin keliya xaaladaha qaarkood. Xusuusnow taas waxa ku jira iyo muhiimadda ay u leedahay shuruudaha loo shaqeeyaha mustaqbalka ayaa ka muhiimsan qaabka. Waxaa kale oo muhiim ah in CV-ga lagu habeeyay xirfadda. Haddii aad boos ka dalbaneyso waaxda xisaabaadka, waxaa fiican inaad iska ilaaliso midabyo jilicsan iyo sawirro farshaxan.
Waxyaabaha noocan oo kale ah waxay u ekaan doonaan wax aan dabiici ahayn. Way fiicantahay in la istaago laakiin hab togan. Marka laga hadlayo xirfadaha u baahan hal-abuurnimada dhammaantiis, mid ayaa waxyar ka weeci kara ka qalin-jabinta isla markaana ku dhejin kara qaab awood leh oo muujinta, ku ciyaarista midabbo ama beddelaya qaabeynta waxa ku jira.
Markaad shaqo raadineyso, waxaa mudan in la furo aaladaha casriga ah iyo ka faa iideysiga. Tusaale ahaan, waxaad ogaan kartaa suurtagalnimada barnaamijka 'Pracuj.pl' ee guurguura, kaas oo kuu oggolaanaya inaad isla markiiba ka jawaabto soo-jeedinta oo ku siiso fursad aad ku kormeerato heerka dalabkaaga.